'विश्वविद्यालय ज्ञान निर्माणमा चुके'
काठमाडाैं– नेपालमा भर्खरै युवा वैज्ञानिकको संस्था ‘नेसनल योङ एकेडेमी नेपाल (नयन)’ गठन गरिएको छ । हाल सात सदस्यीय तदर्थ समिति रहेको संस्थाले छिट्टै नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै छ । संस्था गठन गर्नुको उद्देश्य, अबका योजना, नेपालमा युवा वैज्ञानिकको अवस्था तथा विश्वविद्यालयले ज्ञान निर्माणमा कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् लगायत विषयमा संस्थाका सदस्य डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठसँग शिक्षापत्रले गरेको कुराकानी –
राष्ट्रिय युवा एकेडेमी नेपाल (नयन) गठन गर्ने योजना कसरी बन्यो ?
हामीले एक वर्षदेखि नै नेपाली युवा वैज्ञानिकहरूबीच तीन चरणमा औपचारिक र थुप्रै अनौपचारिक छलफल गर्यौं । त्यो गर्नेमा म लगायत केही ‘विश्व युवा वैज्ञानिक एकेडेमी’का सदस्य साथीहरू पनि थियौं । त्यसकारण हामीलाई युवा वैज्ञानिक एकेडेमीका बाह्य अनुभव थियो । संसारका ४१ देशमा यस्ता एकेडेमी खोलिएको जानकारी थियो । तर नेपालमा त्यस्तो एकेडेमी नभएकाले नेपालमा पनि युवा वैज्ञानिकको संस्था खोलौँ भन्ने योजना बन्यो र नयन जन्मियो ।
यो संस्था गठन गर्नुको उद्देश्य के हो ?
नेपालमा वैज्ञानिक र प्राज्ञिक विधागत सोसाइटी थुप्रै छन् तर युवा वैज्ञानिकको आवाज उठाउने एकेडेमी जस्तो संस्था थिएन । त्यसको आवश्यकता महसुस गरेर हामीले यो एकेडेमी स्थापना गरेका हौं । यो नाम अनुसारकै राष्ट्रियस्तरको संस्था हुनेछ । यसका सदस्यहरूको औसत उमेर ४० वर्ष हाराहारीको हुनेछ । त्यसैले यो युवाहरूको संस्था हुनेछ । तेस्रो, यो संसारका अन्य एकेडेमी जस्तै यसका सदस्य प्राज्ञिक तथा वैज्ञानिक उत्कृष्टताको आधारमा मात्रै चयन गरिनेछ । चौथो, यो बहुविधागत वैज्ञानिकको संस्था हुनेछ । हाम्रो जानकारीमा नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो प्रकृतिको संस्थाको गठन भएको छैन ।
नयनमा सदस्यको छनोट कसरी हुन्छ ? सदस्य कति छन् ?
अहिलेलाई हामीले सात सदस्यीय तदर्थ समिति मात्रै गठन गरेका छौं । तर यसको वास्तविक सदस्यहरूको छनोट अझै हुन बाँकी छ । निकट भविष्यमा आवेदन खुलाएर यसका सदस्यहरू मनोनयन गरिनेछ । अहिलेका सदस्यहरूले पनि सदस्यता लिनुपर्नेछ । तदर्थ समितिको गठन सुरुवाती चरणको प्रशासनिक कामको लागि मात्र हो ।
अरू संस्था र यसमा केही फरक छ कि ?
पहिलो कुरा यो बहुआयामिक संस्था हो । जुनसुकै शैक्षिक विधाका अध्येता, अनुसन्धानकर्ता, वैज्ञानिकहरू (प्रकृति विज्ञान, समाज विज्ञान, मानवशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, इन्जिनियरिङदेखि कानुनसम्मका) ले यसको सदस्य बन्न आवेदन दिन सक्नेछन् र छानिएर सदस्य बन्न पाउनेछन् । दोस्रो, एकेडेमीका सदस्यहरूको छनोट प्राज्ञिक र वैज्ञानिक उत्कृष्टताका विश्व स्थापित मापदण्ड र मान्यताको आधारमा गरिनेछ । त्यो भनेको आवेदक सदस्यको वैज्ञानिक खोज र प्रकाशनको गुणस्तर, त्यसको प्रभाव साथै उनीहरूले समाजमा गर्न सक्ने योगदानको मूल्यांकन आदि हो ।
संस्थाको सदस्य बन्न अरू प्रक्रिया के के पूरा गर्नुपर्छ ?
यो संस्थाले प्रत्येक वर्ष नयाँ सदस्यका लागि निवेदन दिन आह्वान गर्ने छ । आवेदक मध्येबाट प्राज्ञिक उत्कृष्टताका आधारमा प्रत्येक वर्ष औसत २० जना सदस्य छनोट गरिने छ । संस्थामा जम्मा सय जना सदस्य हुनेछन् । पदपूर्तिका लागि पहिलो वर्ष धेरै सदस्यहरू छनोट हुनेछन् । त्यसपछि प्रत्येक वर्ष २० जनाको पदावधि सकिँदै जानेछ । पदावधि सकिएका सदस्यको स्थानमा नयाँ सदस्य आउनेछन् । पाँच वर्षपछि यसका सदस्य सबै फेरिनेछन् । प्रशासनिक काम गर्न सदस्य मध्येबाट एउटा कार्यसमितिको गठन गरिनेछ । यसका अन्य सदस्यहरूले कार्य समूह (वर्किङ ग्रुप) बनाएर ज्ञान–विज्ञानका क्षेत्रमा काम गर्न सक्नेछन् । यो संस्थाले अन्य देशका त्यस्ता युवा वैज्ञानिक एकेडेमीहरूसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने योजना पनि बनाएको छ ।
नेपालमा यो संस्थाले युवा वैज्ञानिकका लागि पुर्‍याउन सक्ने योगदान के–के हुन् त ?
यस संस्थाको मुख्य उद्देश्य भनेको युवा वैज्ञानिकको आवाजलाई मूर्त रूपमा उठाउने हो । दोस्रो, ज्ञान–विज्ञानको क्षेत्रको विकास गर्ने हो । यसले आफ्नो पहिलो प्रोजेक्ट भनेको नेपालका युवा वैज्ञानिकहरूको राष्ट्रिय सर्वेक्षण हो । हामीले खुला तथ्यांक (ओपन डेटा) सम्बन्धी काम गर्न खोजेका हौंं । अर्को काम भनेको सिनियर एकेडेमीको सदस्य बन्न योग्य वैज्ञानिक तयार पार्ने पनि हो । अन्यत्र पनि त्यस्तै गरिन्छ ।
यो नेपालको कुनै विश्वविद्यालय वा एकेडेमी अन्तर्गतको संस्था हो ?
होइन । यसको सदस्यको चयन विधि, कार्यक्षेत्र नेपालका शैक्षिक संस्था भन्दा फरक र फराकिलो छ । तर, नेपालका विभिन्न एकेडेमी र शैक्षिक संस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्ने योजना भने संस्थाले बनाएको छ ।
नेपालमा युवा वैज्ञानिकको अवस्था कस्तो छ ?
त्यसको उत्तर ठ्याक्कै मसँग छैन । त्यो थाहा पाउन पहिलो पटक सर्वेक्षण गरिरहेका छौं । त्यसमा युवा वैज्ञानिकका उपलब्धि, उनीहरूका समस्या, उनीहरूका काम लगायतका विभिन्न पक्षहरू समेटिएको छ । सर्वेक्षणको रिपोर्ट आएपछि यकिन रूपमा जानकारी गराउन सजिलो हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालका युवा वैज्ञानिकको सहभागिताको अवस्था कस्तो देखिन्छ ?
पहिलेभन्दा त धेरै राम्रो सहभागिता छ । तर पनि सन्तोषजनक सहभागिता देखिँदैन । यतिखेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाली युवा वैज्ञानिकले निकै राम्रो काम गरिरहेका छन् ।
युवा वैज्ञानिकको हितमा राज्यले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ?
राज्यले अनुसन्धानको समग्र वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । उनीहरूका लागि उत्प्रेरणा र अवसरहरूको सिर्जना गर्नुपर्दछ । त्यो भनेको युवा वैज्ञानिक वा अर्लि करिअर रिसर्चरहरू केन्द्रित अनुसन्धान अनुदानका कार्यक्रम, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्घिका कार्यक्रम, उनीहरू र सिनियर वैज्ञानिकबीच सहकार्य गराउने खालका कार्यकम हुन् । विकसित देश र हाम्रै दक्षिण एसियाका देशहरूमा त्यस्ता थुप्रै कार्यक्रम हुन्छन् । नेपालका विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान संस्थाहरूमा केही वर्ष पहिलेसम्म पीएचडीपछि गरिने पोस्ट डक्टरल तालिमको पद नै थिएन । यहाँका सीमित अनुसन्धान वृत्तिहरूमा बीसौं वर्ष अनुभव भएका प्राध्यापक वा सिनियर वैज्ञानिकसँग भर्खरै पीएचडी सकेका अनुसुन्धानकर्ताले अनुसन्धान अनुदानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नपर्ने अवस्था छ ।
दक्ष युवा वैज्ञानिक उत्पादनका लागि विश्वविद्यालयले के गर्नुपर्छ ?
ज्ञान उत्पादन जुनसुकै पनि विश्वविद्यालयको उद्देश्य हो तर हाम्रा विश्वविद्यालयहरू यसमा चुकेका छन् । ज्ञान उत्पादनको लागि अनुसन्धान चाहिन्छ तर अपवादलाई छोड्ने हो भने हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा अनुसन्धानलाई बढावा दिने राम्रो वातावरण अझै बनेको छैन । नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयहरू पढाउन वा ज्ञान बाँड्न केन्द्रित छन् । त्यसैले नेपालका विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धानलाई बढावा दिने, विकास गर्ने अनुसन्धान संस्कृति वा प्रणालीको विकास गर्नपर्दछ । अनुसन्धानमा संलग्न हुनेहरूले उत्प्रेरणा पाउने वातावरण हुनुपर्दछ । त्यस्तो भएमा युवा वैज्ञानिकहरूको उत्पादन र विकासमा टेवा पुग्दछ ।
प्रकाशित : आश्विन १, २०७७